Ekike Ejiji Ikwusipu Uwe Egwu
Ngwa: Ihe Hospitallọ ọgwụ: Ọrụ a na-eteghị eke: Na-egbochi ụcha agba: Logo dị ọcha: Logo General Ahia Na-eku Etu, ihe dị fechaa na-agbanwe agbanwe maka nkasi obi na-enweghị atụ Ekekọ na ntanụ nke na-enweghị mmachi na ihe mkpuchi na-adịghị mma na njikwa ihe silicone. -Mụkọta seams maka ezigbo nchedo na ezigbo visibiliti nkepịpị nke mkpuchi onwe maka nchekwa kacha mma Njirimara Ndozi akpuchichara megide ọrịa na-efe efe Nkasi Nkucha ...
PVC American NSF gbaara akara aka
NSF gosipụtara ngwaahịa a. Ihe mebere ya bụ PVC sịntetik ma ọ nweghị protein n'ime latex nke nwere ike ibute ọrịa mmadụ ngwa ngwa. Ndị nwere nfụkasị anụ ahụ na pọgasị latex nwere ike iji ngwaahịa a. Usoro a hoputara, teknụzụ dị elu, mmetụta dị nro, mgbochi skid, ọrụ na-agbanwe agbanwe. Usoro mmeputa nke ngwaahịa a na - emezu ihe niile achọrọ nke National Foundation maka nhazi na nhazi nri. Ndi uwe aka abụghị ihe ntarama ahuhu ...
Ichefu ịsa ahụ PVC nke nwere ike (sọji agba). Ngwaahịa a agafee asambodo US FDA na asambodo EU CE. Made mebere PVC sịntetik, na-enweghị protein na latex nke nwere ike ibute ọrịa mmadụ ngwa ngwa. Ndị ọ na-adịghị mma ma ọ bụ gwọlọ latex nwere ike iji ngwaahịa a. Formu usoro ahọrọ, teknụzụ dị elu, mmetụta dị nro, mgbochi skid, ọrụ na-agbanwe agbanwe. Ọ dabere na ọtụtụ akụkụ dịka nyocha ahụike, ezé, enyemaka mbụ na ọrụ nọọsụ. Ndị na-adịghị egbu egbu, ndị na-adịghị emerụ ahụ na tastel ...
Ihe a na-atụfu ọgwụ mkpuchi PVC (ezigbo ụcha)
Ichefu ọgwụ PVC nke ọgwụ a na-atụfu (agba oji) Made mebere PVC sịntetik, na-enweghị protein na latex nke nwere ike ibute ọrịa mmadụ ngwa ngwa. Ndị ọ na-adịghị mma ma ọ bụ gwọlọ latex nwere ike iji ngwaahịa a. Formu usoro ahọrọ, teknụzụ dị elu, mmetụta dị nro, mgbochi skid, ọrụ na-agbanwe agbanwe. Ọ dabere na ọtụtụ akụkụ dịka nyocha ahụike, ezé, enyemaka mbụ na ọrụ nọọsụ. ...
A nụchara ngwaahịa a site na polyethylene na-enwe nrụgide dị ka akụrụngwa. Ndị na-adịghị egbu egbu, ndị na-adịghị emerụ ahụ, enweghị ihe ụtọ, ọkụ ma dị nro. Iyi iburu ya, ya bu ihe eji eme ogwu bu oria ogwu, nke ulo ogwu, na nchedo ndi oria.
Disposable Mwepu Ahụike Ahụ Maka Sterile
:Dị: ORT- uwe mgbokwasị akụrụngwa: PVC, PP + PE, PE, PP SMS Atụmatụ: disposable, anti-static Asambodo: ISO13485, FDA, CE Propane oxide sterilization: propane oxide sterilization nke ngwa: ụlọ ọgwụ, ụlọ ọgwụ, ndị ọrịa, ụlọ nyocha nke ụmụ nwanyị. Akwụkwọ: Logo obibi: enweghị akara mbipụta logo: S - XXXL :dị: Uwe akwa na-enye aka Asambodo: CE / ISO13485 / FDA Agba: acha anụnụ anụnụ, Aha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ: ndozi aka: Nkwakọ ngwaahịa 5: akwụkwọ edemede 5: ISO, CE A pụrụ ịtụfu s ...
Ahịa a na-eji Ahịa Ahịa Ahịa Ahịa Ndị China Na-ahụ Anya
Ngwa Ihe Nkpuchi Ihe Emuma: Ihe Nkpuchi Ihe Nkpuchi Rination: Asambodo Plexiglass: FDA, SGS, CE, ISO, RoHS Agba: Maskdị Nkpuchi Mara mma: Shadị Nchebe :dị: Maskdị Ihe Nkpuchi Egwu: Maskdị Nchebe Nkịtị: Elastic Earloop Standard: GB / T 32610- 2016 BFE: 95 ~ 99% Ọkwa Nchedo: Aha Nzuzo FFP2: Mkpocha ihu Mkpuchi Nke Nwere Ahụhụ: Igwe Ọdụdọ Etiti Adult: 3 Plys Valid: Afọ 1 Nchịkọta Ozi Mgbakwunye: Otu nke 10 (enweghị obere igbe), katọn nke 3000 PC , katọn na-atụ 8kg. Carton siz ...
Asambodo Asambodo Nje Virus Ntughari Kn95
Ihe omuma nke uzo: HXW - M025 Ngwa nke masks: mkpuchi nchebe masks Asambodo: FDA, CE, ISO Thedị agba agba ọcha: nchekwa ozi Ozi ụgbọ mmiri: oké osimiri, Asambodo ikuku: ISO, CE, FDA Nkọwapụta ngwaahịa CE nke a na-ejikarị diskiable antivirus Nkpuchi KN95 Ihe eji mara ahuhu: akpukpo ahu nwere akpukpo ahu, imekorita ya nma na ihu, meziwanye ihe nkasi aka Nweta mmetu nke imi iji belata ndabia anya nke mmuta ma meziwanye v ...
Ihe omuma nke ihe omuma: nke N95 Mask: nkpuchi nchebe radieshon Materi: plexiglass Asambodo: FDA, SGS, CE, ISO, RoHS Mask ụdị: nchekwa ụdị: ihe mkpuchi uchu: protectiondị nchedo kwa ụbọchị: ntị na-ekwusi ike Nwepu BFE: ọkwa nchebe: FFP2 Aha ngwaahịa: nkpuchi mkpofu nke kwesịrị ekwesị maka: okenye nkịtị size Nrụ ọrụ: afọ 1 Agba: ọcha ọkọlọtọ: en 149: 2001 + a1: 2009 FFP2 Ọnọdụ njem: oké osimiri, ikike ọkọnọ ikuku: 50 nde Akwụkwọ: CE / ISO / FDA Ngwaahịa nkọwa…
covid 19 mgbochi ahihia nchekwa echebe goggle
Igwe nchekwa dị iche iche bụ ụdị iko pụrụ iche iji gbochie radieshon, kemịkalụ, sistemụ na ebili mmiri dị iche iche. Enwere ọtụtụ iko nchedo, iko uhere ị na-ahụkarị, iko ujo, iko mmiri na iko mgbochi radieshion. Nleba mba. : Iko iko ORT Ihe eji eme ihe: sọks-proof PC lens, naịlọn etiti :dị: agba agba: atụpụta: njiri mara mma, nchedo dị mma: Logo: ụdị onodu njem: site n'oké osimiri…
Mpempe ngwaahịa ： 33 * 22cm PET ịcha ọkpụrụkpụ: nkọwa ihe ngosi 0.25mm ： PET anti-fog mpempe akwụkwọ + na-acha ọcha sponge + elastic band ngwaahịa arọ ： ihe dị ka ọrụ 43g nke ngwaahịa ： ihe mgbochi - mgbochi, anwụrụ anwụrụ ọkụ, ájá na ájá. kpuchie ngwaahịa Ahịa] 33 * 22cm PET ihe mkpuchi ihe nkiri: 0.25mm nkọwa ihe ： Mpempe akwụkwọ mgbochi PET + mpempe na-acha ọcha + elastic band Ahịa ngwaahịa ： ihe dị 43 g ọrụ ọrụ: mgbochi ịgba, mgbochi na-eme ka uzuzu, ájá na ájá Jiri ihe ahụ. nzọụkwụ dị iche iche ...
1 2 Ọzọ >> Peeji nke 1/2